Nijirika ny Apple Watch izy ireo ary nametraka rindran-damina zanatany [Video] | Avy amin'ny mac aho
Mpanamboatra sy mpijirika, Steve Troughton-Smith y Lakolosy Adama, miaraka amin'ny fanampian'ny saurik, Nahavita izy ireo hack ny fiambenanaOS 2.0 (Rafitra fiasan'ny Apple Watch), hihazakazahana rindran-damina feno. Troughton-Smith dia nandefa horonantsary omaly alina, mampiseho porofon'ny zava-bita. Midika izany fa miasa tsy miankina amin'ny iPhone. Araka ny hitanao amin'ny horonantsary napetrakay taminao aorian'ny namakiany azy ireo dia nahavita a zavatra 3D interactive miasa amin'ny Apple Watch.
Ny olana lehibe eto dia na dia Apple Says dia hanohana ireo fampiharana teratany, ny mpikirakira dia mbola voafetra ihany amin'ireo rindranasa ireo. Ity fikafika ity anefa dia manaparitaka ireo fetra ireo, mamela ny fampiasana ny rafitry ny interface rehetra ho an'ny mpampiasa, ahafahany miditra. Eo ambanin'ny bitsika izay ahitanao ilay horonan-tsary.
Ka… nandany hacking tamin'ny alina @ b3ll (& @saurik!) - nahazo rindrambaiko UIKit (& SceneKit) izahay tamin'ny Apple Watch 🎉 (horonantsary) pic.twitter.com/khcpHgVsZo
- Steve TS (@stroughtonsmith) Jona 12, 2015
Ny hack dia tokony hanome taratra fanantenana ihany koa ho an'ny olona izay maniry a Jailbreak ho an'ny Apple Watch. Mazava ho azy fa tsy jailbreak isan-se izany, ary tsy manolotra tolotra telolahy tsy misy antsipiriany momba ny hack. Saingy ny fahafahan'izy ireo nanalavitra ny fetra an'i Apple dia vaovao tsara. Tsy vao sambany no voajirika ny Apple Watch, ato amin'ity lahatsoratra ity, Nopotehin'izy ireo ny Apple Watch mba hivezivezy amin'ny Internet. toy ny Hoy i Comex fony izy ireo nijirika ny Apple Watch tao amin'ilay lahatsoratra napetrakay teo aloha, «Ny rafitra fiasan'ny famantaranandro dia mifototra amin'ny UIKit, saingy tsy mamela ny SDK hihazaka kaody zanatany«. Ary io fetra io, efa nahavita nitsambikina izy ireo.
Ahoana raha azonao antoka fa ny fandikana ireo fetra ireo dia mety hahatonga ny Jailbreak, saingy mametraka fanontaniana amin'ny tenako aho, Misy dikany ve ny jailbreak amin'ny Apple Watch?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Nijirika ny Apple Watch izy ireo ary nametraka rindran-damina zanatany [Video]
Ny famantaranandro famantaranandro dia tsy niakanjo taloha intsony, ianareo mpandeha adala ...
Ny fanangonana lehibe indrindra ny vokatra Apple any Espana, amidy